ဖေ့ဘုတ်တည်ထောင်သူ မတ်ခ်ဇူကာဘတ်ရဲ့ စိတ်ဝင်စားစရာအချက်တချို့ - Thutazone
ဖေ့ဘုတ်တည်ထောင်သူ မတ်ခ်ဇူကာဘတ်ရဲ့ စိတ်ဝင်စားစရာအချက်တချို့
၁. Mark Zuckerberg ရဲ့နာမည် အပြည့်အစုံက Mark Elliot Zuckerberg ဖြစ်ပြီး မိဘနှစ်ပါးမှာ သွားဆရာဝန် နှင့် စိတ်ရောဂါအထူးကုဆရာဝန် တို့ဖြစ်ကြပါတယ်။
၂. အသက် (၁၂) နှစ်တွင် ကွန်ပြူတာပရိုဂရမ်များ စတင်ရေးသားခဲ့ပြီး Zucknet အမည်ရှိ မက်ဆေ့ချ်ပို့တဲ့ အက်ပလီကေးရှင်းတစ်ခုကို ရေးသားပြီး သူ့အဖေရဲ့ သွားဆေးခန်းမှာစတင်အသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။နောက်ပိုင်း သူ့ရဲ့အိမ်မှာ မိသားစုတွေတစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် ဆက်သွယ်ဖို့အတွက် အသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။
၃. သူငယ်ချင်းတွေအတွက် အပျော်တမ်းဆော့ဖို့ ဂိမ်းပရိုဂရမ်တွေကိုလည်းဖန်တီးခဲ့ပါတယ်။
၄. ပရိုဂရမ်ရေးတဲ့နေရာမှာ ပါရမီပါတဲ့အတွက် သူ့အဖေက Zuckerberg အတွက် ကွန်ပျူတာဆရာတစ်ယောက်ကို တစ်ပတ်တစ်ကြိမ် အိမ်ခေါ်ပြီးသင်ယူစေခဲ့ပါတယ်။
၅.အထက်တန်းကျောင်းမှာတည်းက သူ့ကို AOL နှင့် Microsoft ကနေ ခေါ်ယူဖို့ ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။
၆. သူ့မှာ Beast လို့အမည်ရှိတဲ့ ခွေးလေးတစ်ကောင်ရှိပြီး သူ့မှာ ဖေ့စ်ဘုတ် ပရိသတ်၁.၅ သန်းရှိပါတယ်။
၇. အနီရောင်နဲ့ အစိမ်းရောင် color blind ဖြစ်တဲ့အတွက် Facebook မှာ အပြာရောင် အဓိကအသုံးပြုထားတာဖြစ်ပါတယ်။
၈. သူ့ကိုယ်သူ ဘယ်ဘာသာမှမကိုးကွယ်ပဲ ဘာသာမဲ့တစ်ယောက်အဖြစ် ခံယူထားပါတယ်။ (ပြီးခဲ့တဲ့ နှစ်ကုန်တုန်းကတော့ သူဟာ ဘာသာမဲ့တစ်ယောက်မဟုတ်တော့ပါဘူးလို့ ပြောခဲ့ပါတယ်)
၉. Facebook မှာ Mark Zuckerberg ကို ဘလော့ခ်လို့မရပါဘူး။
၁၀. သူ့ဇနီးရဲ့မိသားစုနဲ့တွေ့ဖို့အတွက် တရုတ်စကားသင်ခဲ့ပါတယ်။
၁၁. ၁၉ဘီလျံခန့်ချမ်းသာလာချိန်မှာ လက်ထပ်လက်စွပ် ကို ဒေါ်လာ ၂၅၀၀၀ တန်သာ ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။
၁၂. မေ ၁၉၊ ၂၀၁၂ တွင် အိမ်နောက်ခြံဝင်းမှာဘဲ လက်ထပ်ပွဲလုပ်ခဲ့ပါတယ်။
၁၃. Facebook ရဲ့ ရှယ်ယာ (၁၈) သန်းကို Silicon Valley Community Foundation သို့ လှူဒါန်းခဲ့ပြီး အမေရိကန်နိုင်ငံရှိ အသက်(၃၀)နှစ်အောက် အလှူအတန်းအရက်ရောဆုံး ထိပ်တန်းစာရင်းဝင်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
၁၄. သူဟာနေ့တိုင်း မီးခိုးရောင် တီရှပ်ကိုပဲ ဝတ်ဆင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ၂၀၀၉ ခုနှစ်မှာတော့ စီးပွားရေးကျဆင်းမှုကို ကြုံတွေ့နေရတဲ့အချိန်မှာ ဖေ့ဘုတ်ကို သူဘယ်လောက် အလေးထားပြီး လုပ်ဆောင်နေလဲဆိုတာ ပြသချင်လို့ နေ့တိုင်း အနောက်တိုင်းဝတ်စုံ ပြည့်ဝတ်ခဲ့ပါတယ်။
၁၅. ၂၀၁၁ ခုနှစ်ကနေစပြီး သက်သတ်လွတ်စားခဲ့ပါတယ်။
၁၆. သူရဲ့ ပထမဆုံးကားမှာ Subaru Forester SUV အမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။
၁၇. အကြိုက်ဆုံးအဆိုတော်က Lady Gaga နှင့် Draft Punk တို့ဖြစ်ပါတယ်။
၁၈. သူဟာ TV ကြည့်လေ့မရှိပါဘူး။
၁၉. Facebook အကြောင်းရိုက်ကူးထားတဲ့ The Social Network ဇာတ်ကား ရဲ့ သရုပ်ဆောင် Jesse Eisenberg ရဲ့ ပရိသတ်တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။
၂၀. သူ့ရဲ့သူငယ်ချင်းတွေက Zuck လို့ ခေါ်ပြီး သူ့အမေက ချစ်စနိုးနဲ့ Princely လို့ခေါ်ပါတယ်။
ကမ္ဘာကျော် နာဆာ(NASA) အဖွဲ့ချုပ် ဆိုသည်မှာ